विप्लवलाई रोल्पाली जनताले चिनिसकेः झंकार बुढा « Janata Samachar
विप्लवलाई रोल्पाली जनताले चिनिसकेः झंकार बुढा
प्रकाशित मिति : 15 March, 2019 5:35 pm
सामना परिवारका अध्यक्ष झंकार बुढा माओवादी जनयुद्धमा करिब ५ सयको हाराहारीमा जनवादी गीत गाउने जनगायक हुन् । जानिनजानी गीत संगीतमा आकर्षित भएका बुढाको परिचय जनवादी गायककै रुपमा स्थापित छ । रेडियो जनता ८९.१ मेघाहर्जमा ‘कार्यक्रम सिमली छाया’मा प्रस्तोता रामकुमार एलनसँग बुढाले आफ्नो सांगीतिक जीवनका घुम्तीहरु यसरी सुनाउनु भएको छः
तपाईंंले गीतमा ‘पौरखी जनताको गतिशील’ भने झैं भूगोल र जनयुद्धको हेडक्वाटर रोल्पा फेरियो वा उस्तै छ ?
जब म १६ वर्षको उमेरमा नेपाल आएँ, त्यतिबेला दाङबाट ५ दिन हिँडेर ५ किलो नुन र १ नम्बरी चामल बोकेर रोल्पा पुगेको थिएँ । त्यो समयको रोल्पा र आजको रोल्पा दाँज्ने हो भने आज धेरै माथि छ । आज यातायात विकासले ५ दिन हिँड्ने बाटो साँघुरिएको छ । जनताको त्यागको पूर्ण मूल्याङ्कन भइसकेको नभए पनि रोल्पा त्यो दिशामा अघि बढेको देख्छु ।
तपाईंका गीतले भनेजस्तै रोल्पाली समाजमा युद्धका खाटा र विभेद उस्तै छन् कि घटे ?
पछिल्लो समय त्यस्तो देखिँदैन । मेरो रोल्पाको ‘गाउँ नै राम्रो, मेरो रोल्पाको ठाउँ नै राम्रो’ भनेर रोल्पालाई नै केन्द्रित गरेर भिडियो बनाउने तयारी गरिरहेको छु । जति विभेद बाहिर छ, त्यति रोल्पामा देखिँदैन ।
समयसँगै फेरिएको रोल्पामा समानता र सम्पन्नताको घाम कत्तिको लागेको छ ?
मैले अघि भनेजस्तै जसरी १० वर्षे जनयुद्धसँगै रोल्पा उठ्यो, त्यसैगरी समानता र सम्पन्नताको लहर नै चल्न नसके पनि परिवर्तनको बाटोमा रोल्पा हिँडिरहेको देखिन्छ ।
रोल्पामा गुरिल्ला ट्रेल बनाउनेदेखि पर्यटकीय विकास गर्ने प्रचण्डको योजना थियो, अहिले फेरि अर्को रोल्पा हेडक्वाटर बनाउनुपर्छ भनेर विप्लव कटुवाल ठोकिरहनुभएको छ, रोल्पाकै स्रस्टालाई सोध्न मन लाग्यो, के असन्तुष्टिको राग अझै पनि छ त्यहाँ ?
मलाइ विप्लवजीले गरिरहेको कुरा राजनीति र अझ स्वार्थको प्रभाव हो जस्तो लाग्छ । रोल्पाबाट यी सबै नेताहरुले एकैसाथ युद्ध शुरु गरेका हुन् र शान्तिप्रक्रियापछि सबै मिलेर चुनाव जितेका हुन । मेरो विचारमा युद्धका बेला सहयात्री सबै नेताहरु आज पनि सँगै भएको भए आज देश यिनीहरुकै हातमा हुन्थ्यो । देशले पनि नयाँ गति लिइसक्थ्यो तर नेताहरु आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । फेरि पनि आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि अर्को रोल्पा बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । रोल्पाली जनताको बुझाई पनि यस्तै छ । रोल्पा देखाएर आफू हिरो बनिरहेका नेताहरुबारे राल्पालीहरु जानकार छन् ।
अब तपाईंको व्यक्तिगत विषयमा प्रवेश गरौँ, तपाईं अत्यन्तै राम्रो सारंगी बजाउनुहुन्छ, कहाँ सिक्नुभयो ?
म ६ महिनाको हुँदै आमासँग भारत गएको थिएँ । त्यहाँ बस्दा मैले रेडियो नेपाल सुन्थेँ । रेडियोमा सारंगी बजेको सुन्न थालेपछि पहिले बाँसुरी बजाउने गरेको मैले आमासँग बाँसुरी किनी मागेँ । त्यहीबेला नेपालबाट सारंगीवादक भारत गएर बजाउँदै हिँडेको देखेको थिएँ । यस्तै कुराले प्रभावित भएर आफैँले सारंगी बनाएर २०४९ बाट बजाउन थालेको हुँ ।
सारंगीवादक झंकार बुढाको जनयुद्धसँगचाहिँ कसरी सामीप्यता गाँसिन पुग्यो ?
२२ वर्षको उमेरमा जब म गाउँ आएँ, त्यसबेला मैले गाउँका सबै युवा माओवादीमा आवद्ध भएको देखेँ । हरेक साँझ गाउँमा भेला र सभा हुने गर्थे । मजस्तो सारंगी बजाउने व्यक्ति गाउँमा आएपछि उहाँहरुले मलाइ पनि युद्धमा लाग्न अनुरोध गर्नुभयो र मलाई टोल कलाकारमा आवद्ध गराउनुभयो । मेरो जनयुद्धको सांगीतिक यात्रा यसरी शुरु भयो । म आफूसँग भएको सारंगी बोकेर युद्धमा कलाकारका रुपमा आवद्ध भएँ । विदेशिनु परेका कारणले मेरो आमाबुवाको विछोड भएको घटनाले पनि युद्धमा लागेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरामा मलाइ कन्भिन्स थिएँ ।
तपाईं युद्धको आलोकमै जन्मेको कलाकार हुनुहुन्छ, तर युद्धकालका कयौँ स्रष्टा आज गुमनाम छन् । देशमा दुई तिहाईको वाम सरकार छ, यस्तो स्थिति किन आयो भन्ने लाग्छ ?
गाउँतिर बुढापाकाले ‘अर्काको भर उत्तानो पर’ भनेजस्तै भएको छ । कलाकारहरुले नेताहरुको भर पर्दा यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ । पार्टीका कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । कलाकार आफैँ पनि परनिर्भर हुनाले त्यो समस्या भएको हो । प्रसिद्ध गायक जीवन शर्माकै अवस्था हेर्नुहोस न, जीवनभर पार्टीमै रहेर गीत गाएको व्यक्तिलाई अहिले आएर आफ्नै पार्टीले कारबाही गर्यो । यद्यपि यसका साथसाथै केही कलाकारले आफूलाई समयअनुसार अघि बढाइरहेकै पाइन्छ । हामीमा एकता आवश्यक छ ।
कलाकारले लामो समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि गीत गाए, अब आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि पनि एकपटक जनता जगाउनुपर्ने बेला आएको हो कि ?
कलाकार राष्ट्रका गहना हुन् । जहाँ कलाकार हुन्छन्, त्यहाँको राजनीतिक चेत छुट्टै हुन्छ । हामी आफूमा पनि समस्या छन्, हामी मिल्न सकिरहेका छैनौँ । तपाईंले भनेकोे जस्तै अब कलाकारले देशको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि जागरण ल्याउन लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तपाईं पहिलोपटक काठमाडौं चाहिँ कहिले आउनुभयो ?
शान्ति प्रक्रियापछि सामना परिवारको केन्द्रीय टोलीमा हुँदा म पहिलोपटक २०६३ को असोजमा काठमाडौं आएको थिएँ ।
युद्धबीचमा लडाइँहरुमा पनि पर्नुभयो कतै ?
त्यस्तो त धेरै भयो । म्याग्दी, अर्घाखाँची र जुम्लालगायतका मुठभेढमा परियो । तर कलाकारलाई लडाइँमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यता नभएकाले युद्धमा लड्न त परेन । देशका कयौँ ठाउँमा पक्राउ हुनबाट धौधौ जोगिएको छु ।
कुराकानी पूरा सुन्नुहोस्ः
पाटन अस्पतालमा तनाव